खेलकुद Archives - SamudayikNews
Nov202019 by userNo Comments
Lionel Messi’s ALL 29 Free-Kick GOALS since 2014 (Must Watch)
Lionel Andrés Messi Cuccittini(Spanish pronunciation: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] (About this soundlisten);[A] born 24 June 1987) is an Argentine professional footballer who plays asaforward and captains both Spanish club Barcelona and the Argentina national team. Often considered the best player in the world and widely regarded as one of the greatest players of all time, Messi has wonarecord six FIFA Ballon d'or/Best FIFA Men's Player awards,[note 2] andarecord six European Golden Shoes. He has spent his entire professional career with Barcelona, where he has wonaclub-record 34 trophies, including ten La Liga titles, four UEFA Champions League titles and six Copas del Rey. A prolific goalscorer andacreative playmaker, Messi holds the records for most goals in La Liga (427),aLa Lig
एजेन्सी– लुइस स्वारेजको ठाँउमा अर्को खेलाडीका विषयमा बार्सिलोनाले अघि कुनै विकल्प सोचिसकेको छैन । तर, स्वारेजकै भनाई भने अलि फरक छ । यदि क्लबले अर्को कोहि खेलाडीलाई ल्याउँछ भने पनि त्यसमा आफुलाई आपत्ती नहुने उनले बताएका छन् । उरुग्वेली स्टार ३२ वर्षका भइसकेका छन् । फुटबलमा यो उमेर एकदम युवा अवस्था होइन । ‘यस्तो समय आउँछ । त्यो उमेरमा मैले चाहेर पनि बार्सिलोनामा आवश्यक पर्ने जस्तो स्तरको प्रदर्शन दिन सक्दिन’, स्वारजेले भने, ‘तर जति बेला सम्म मसँग सामाथ्र्य हुन्छ त्यति बेला नै क्लबले प्रतिस्पर्धा बढाउन सके झनै राम्रो । यदि क्लबले नयाँ फरवार्डका बारेमा सोचेको छ भने त्यसमा मैले आपत्ती मान्नु पर्ने केहि छैन ।’ उनले व्यवासायिक फुटबलमा नयाँ खेलाडी आउने विषयलाई समान्य रुपमा लिएका छन् । ‘फुटबलको वास्ताविकता नै यहि हो । मेरो लागि पनि यो राम्रो हो । समयले हरेकको विकल्प खोज्छ,’ लिभरपुलका पूर्व स्टार
Nov192019 by userNo Comments
नेपाल विरुद्ध कुवेत (प्रत्यक्ष प्रसारण)
खेलका लागि प्रशिक्षक योहान कालिनले सुरुवाती ११ छनोट गरेका छन् । टोलीको गोलरक्षण किरण चेम्जोङले सम्हालेका छन् ‌। डिफेन्समा अन्नत तामाङ, देवेन्द्र तामाङ, अजित भण्डारी र रञ्जित धिमाल रहेका छन् । रोहित चन्द र विक्रम लामासँगै तेज तामाङले सेन्टर मिडफिल्ड सम्हाल्नेछन् । विङ्समा सुजल श्रेष्ठ र रवी पासवान तथा एकल फरर्वाडमा अभिषेक रिजाल खेल्नेछन् । नेपालले घरेलु मैदान तयार नहुँदा विश्वकप छनोटको खेल भुटानमा खेल्नुपरेको हो । नेपालले हालसम्म ४ खेलमा १ जित र ३ हार बेहोरेको छ । यसपटक टोलीमा टोलीका ४ महत्त्वपूर्ण खेलाडी साथमा छैनन् । उनीहरु टोली प्रस्थान गर्ने अघिल्लो रात क्लबमा भेटिएको कारण अनुशासन कारवाहीस्वरुप निलम्बनमा परेका हुन् ।